Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Dominica Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Dominica inonyora kuvandudza mu Covid-19 chinzvimbo, sekureva kweGurukota rezvehutano, Wellness uye Nyowani Hwehutano Investment, Dr. Irving McIntyre. Izvi akataura nezvehurongwa hweHurumende yake hwekugadzirisa dambudziko uye kutevedzera veruzhinji. Huwandu hwezviitiko zvakasimbiswa zvinoramba zviri pa16, pane matatu anoshanda kesi, vanhu makumi matatu nesere vakaedzwa, uye vanhu gumi parizvino vari munzvimbo yeHurumende inomhanyisa yekuisa vanhu. Zvisinei, Gurukota rakayambira ruzhinji, “Tinofanira kukuyeuchidzai kuti ichi hachisi chikonzero chekutandara nekutadza kufunga. Kuzvipira kwako kuri kuitirwa zvakanakira isu tese. ” Tichifunga nezvenzvimbo iripo yeCOVID-3, timu yehunyanzvi yeHutano Hwehutano yakapa mazano ekugadziriswa kweSRO383 ya10 iyo inobvumidza kusimudzwa kwezvimwe zvinorambidzwa.
Prime Minister weDominica, Anokudzwa Roosevelt Skerritt akazivisa kurerutswa kwezvirango zvinotevera:
Maawa ekuvhura emabhizimusi anobva ku6 am kusvika 4 pm Muvhuro kusvika Chishanu. Nguva yekudzoka inoramba ichishanda kubva na6 pm kusvika 6 am Muvhuro kusvika Chishanu nekukiya kwakazara pakupera kwevhiki nemazororo.
Inishuwarenzi masevhisi, yekuwachira masevhisi, zvitoro zvemabhuku uye auto makanika mashopu zvino anogona kuvhurirwa mabhizinesi. Zvibvumirano zvinoramba zviripo zvekuvhara mabhawa, makirabhu ehusiku, mashopu emitambo, masalon salon, manicure uye pedicure mashopu nemabhabhashopu. Iyi inorambidzwa ichaongororwa muna Chivabvu 4, 2020.
Mabhazi evapfuuri anogona kutakura vafambi vaviri pamutsara anoshanda Kubvumbi 2, 27, zvisinei, maprotocol ekuchenesa vafambi maoko vasati vapinda mumotokari, vakapfeka mamask ekumeso kana jira rejira kuvhara mhino nemuromo, zvichitevera hunhu hwekufema uye kuchengeta mawindo akavhurika kusvika zvinogoneka, inofanirwa kutevedzwa.
Kurambidzwa kwerezinesi rezvinwiwa kuchabviswa kutanga Kubvumbi 27, 2020 kubvumira kutenga chete doro uye kwete kunwa panguva yekutengesa.
Chibereko chitsva chichatengeswa kunzvimbo dzakatarwa nemisika kusvika kuma4 masikati, Muvhuro kusvika Chishanu. Kubudirira kwaApril 28, 2020, nzvimbo ichagoverwa kubvumidza kutengeswa kwezvibereko kubva mumarori anotora muguta guru. Zvirongwa zvekuchinja kwemuviri zvichachengetedzwa.
Kurambidzwa kwekuungana kukuru kunoramba kuchishanda nevanhu vasingapfuuri gumi vanotenderwa panzvimbo yeruzhinji panguva, uye maprotocol ekuparadzanisa emuviri anofanirwa kuteverwa. Maresitorendi nenzvimbo dzechikafu dzinogona kuvhurira bhizinesi kusvika kuna 10 pm yekutora sevhisi chete. Kumwe kugadziridza kuchapihwa muna Chivabvu 4, 4.
Nezve COVID ruzivo rwakanangana neDominica ndapota shanyira yedu Dominica Gadziriso saiti pa http://dominicaupdate.com/.